TOKO 42 ...
Misy mampametra-panontaniana anaty ihany ny zava-boalaza sasany amin’ ny fara-teny amin’ ity Boky ity . Izao firehetan’ ny fahatezeran’ Andriamanitra amin-dry Elifaza sy ny namany izao , dia tena mahagaga mihitsy :
Joba indray eto no neken’ Andriamanitra ho efa “nilaza ny marina” , nefa izy dia tena fatra-panome tsiny an’ Andriamanitra , sady nanamaizina ny fiainana tamin’ ny teny tsy nisy fahalalana .
Ireo izay tena niaro ny voninahitr’ Andriamanitra indray kosa , no notsinina fatratra .
a)- Hita arak’ izany , fa tsy mba tahaka ny fijerin’ olombelona ny fijerin’ Andriamanitra .
Na dia misy marina aza ny teny nalahatr’ izy telo lahy :
Dia fandrenesan’ ny sofina ihany ny azy , finoana marina-ila ka naman’ ny diso ihany amin’ ny totaliny .
Ny fanahy sosotra izay nasehony , indrindra fa rehefa nangotraka ny adi-hevitra, dia voajerin’ Andriamanitra .
Ny handresy lahatra an’ i Joba sy ny hanery azy hanaiky ny heviny no nokendren’ izy ireo , hàny rehefa tsy neken’ i Joba izany, dia nandroatra ny fahatezerany .
Tonga mba hampionona izy ireo, kanjo mpampionona tsy nahomby , satria ny teny betsaka nataony aza, no vao mainka nampitombo ny fahorian’ ny marary .
b)- Fa Joba kosa , na dia toa diso matetika aza amin’ ny toetra nasehony sy ny teny naloaky ny vavany , ary saiky namoifo indraindray ,
Dia mba niady ny “ady tsaran’ ny finoana” ihany .
Nitolona tamin’ ny fakam-panahy , ka ny fahoriana izay efa nidona taminy kosa dia tsy mba nohadinoin’ Andriamanitra .
Mazava tsara amintsika ary izao ny fizotran’ ny Tantara amin’ ity Boky ity , ary tsy afenin’ny Mpanoratra , fa
Ny diso dia tsy mba navelan’ Andriamanitra ho afa-maina .
Nasainy nifona tamin’ i Joba izy telo lahy , sady hanatitra fanatitra lehibe ho an’ Andria-manitra noho ny fahadisoany . Sazy mafy izany !
Ary rehefa nampahalalain’ Andriamanitra azy ireo ny fahadisoany , dia,tsy mba nidongy na nandà akory izy . Ary ny tena mahazendana dia ity : nitohy tsara indray toy ny teo aloha ny fihavanan’ izy ireo tamin’ i Joba .
Ny tenan’ i Joba izay noheverin’ izy ireo ho mpanota raindahiny , sady nolazaina ho mpandà an’ Andriamanitra indray , no indro voatendriny ho mpivavaka ho azy telo lahy . Mahagaga izany ! Misy Lesona Telo tsara ho fianatra ireto :
Lesona Voalohany : Ny Nampodian’ Andriamanitra ny fiadanan’ i Joba :
Hita eto amin’ ny Toko 42 , ny nanomezan’ Andriamanitra indray an’ i Joba , ny fananany indroa toraky ny teo aloha sy ny zanaka folo mianadahy . Misy somary manahirana kely ny eritreritra ihany eto , satria toa miverina indray ilay finoana maintimolaly izay nitompoan’ izy telo lahy fatratra hoe: “Miankina amin’ ny hatsaram-panahy ny fanambinana amam-piadanana ananan’ ny zanak’ Olombelona”.
Hevitra hita fa diso anefa izany , ary efa novaliana . Nefa kosa , misy hevitra mitranga ao izay “Tena Mahafinaritra sy Mampieritreritra” tokoa , dia izao :
Rehefa niaiky ny fahadisoany tamin’ Andriamanitra i Joba , dia nody ny fahasalaman’ ny tenany .
Nantsoin’ Andriamanitra hanao ny raharaham-pisoronana izy .
Tsy nody anefa ny fiadanany raha tsy efa nivavaka ho an’ ireo sakaizany izy ( 42.10 ) .
Lesona Faharoa : Ny Fibebahana sy ny Fivavahana :
Tsy afa-misaraka amin’ ny fiainan’ ny olona iray isan’ andro isan’ andro sy ara-potoana ,
indrindra ho an’ ny mpino, ny fibebahana sy ny fivavahana , satria rivotra iainany sy sakafo mamelonaazy izany . Nahoana ?
Tsara ny mibebaka sy mivavaka ho an’ ny tena , ary tokony hatao ho voalohan-draharaha izany , satria ahazoam-pitahiana tokoa . Nefa dia ahazoam-pitahiana mihoatra lavitra noho izany ny mivavaka ho an’ ny hafa .
Ny vavaka atao ho an’ ny tena dia mety hifangaro fitiavan-tena ihany , fa ny vavaka atao ho an’ ny hafa kosa rehefa tanteraka ny asany , dia manako ao am-pon’ izy mivavaka indray !
Lesona Fahatelo : Taiza ireo Sakaiza nandritry ny Fahoriana ?
Ny mahatsikaiky voalohany eto , rehefa nody ny fiadanan’ i Joba , di any fiverenan’ ireo havany sy ny sakaizany maro . Fa taiza izy rehetra ireny izay ela izay ? Isan’ ny zavatra nampitaraina fatratra an’ i Joba tao anatin’ ny fahoriany , ka nahafoizan’ ny havany aman-tsakaizany azy :
Ny sasany tamin’ ireny dia mpanompo tao an-trano .
Ny sasany dia vahoaka niankin-doha taminy , ary efa nandray soa be taminy izay elabe izay .
Nankaiza moa ireny rehetra ireny ?
Toa Havana raha misy patsa ny sasany .
Toa tsy sahy nanatona ny sasany noho ny aretim-be namely azy .
Nankaiza ny iray-tam-po taminy, di any rahalahiny sy ny anabaviny ?
Tsy sahy nanatona na nanakaiky izy ireny , noho ny fiheverany fa olona voaozona Joba .
Noheverin’ izy ireny koa, fa efa nafoin’ Andriamanitra izy .
Asa lahy ! Fa dia nirodorodo indray izy rehetra , ka tonga nitsidika sy nitondra famangiana ary niarahaba azy rehefa nody indray ny fiadanany . Fomban’ olombelona ihany izany , mivadi-badika manaraka ny toe-javatra sy ny zava-misy , hàny ka manary an-kasarotana . Misy anefa
fombam-piteny sarobidy hoe “Ny sakaiza izay tsy mahafoy amin’ ny andro mahory no tena sakaiza”.